के हुन्छ यदि ब्लगर्स स्ट्राइकमा गए? | Martech Zone
शुक्रवार, नोभेम्बर ०,, २०२० शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० Douglas Karr
जब म यो जस्तो पोष्ट लेख्छु, मलाई लाग्छ म क्रोधित छु गुगल शक्तिहरू-त्यो-हुन। मेरो ब्लगको क्षमता 'फेला पार्न' यसको सफलताको कुञ्जी हो। वास्तवमा, मेरो आधा भन्दा बढी आगन्तुकहरू दैनिक आधारमा खोज इञ्जिनहरूबाट आउँदछन्, बहुमत मदर गुगलबाट। म कडा मेहनत गर्दछु कि म Google को लागी रातो कार्पेट बिछ्याउन सबै पम्प र परिस्थितिहरूको कारणले गर्दा उनीहरू ममाथि हाँसे।
गुगलले गौंलेट राखेको छ 'भुक्तानी लिंक' को दण्डका लागि धेरै मान्छे तिनीहरूको सामग्री भित्र। केही पनि भएको छ आत्मसमर्पण पत्र लेख्न र विज्ञापन गर्न बाध्य.
तर म यसबाट थाकेको छु। मलाई गलत नबनाउनुहोस्, म अझै पनि गुगलको विस्मयमा छु र म उनीहरूको अनुप्रयोगहरू हरेक दिन प्रयोग गर्दछु। तिनीहरू एक अविश्वसनीय कम्पनी हो र मलाई खुशी छ कि उनीहरूको उपस्थितिले अन्य ठूला-साथीहरूले उनीहरूको प्यान्ट पेशाब गर्दछ। मलाई इन्टरनेट मनपर्ने एक कारण यो हो कि यो यत्तिको बराबर हो।
गुगलले यो ब्लगबाट कति बनाउँछ?
मैले यो ब्लगमा १,००० भन्दा बढी पोष्ट लेखेको छु र गुगलबाट एक दिन 1,000०० आगन्तुक छन्। मानौं हामी केवल तर्कको खातिर भन्छौं कि गुगलले प्रत्येक १० खोजीमा एक पटक १० सेन्ट बनाउँछ। त्यसोभए on०० खोजीहरूको लागि मैले माथि आएँ, 500० खोजहरू थिए जुन सशुल्क लिंकमा क्लिक गरिएको थियो, $ 10०० को बराबर। गुगलको साथ निष्पक्ष हुनको लागि, म पृष्ठमा १० परिणामहरूमध्ये १ मात्र १ हुँ, त्यसैले मानौं हामी गुगलको दैनिक तल्लो लाइनमा c० सेन्टिब्ट गर्न मद्दत गर्दछु। वर्षको अन्त सम्म, सायद मैले १०० डलर बनाउन Google लाई सहयोग गरेको थिएँ।
मैले बुझें कि यो अस्पष्ट गणित हो, तर मेरो कुरा भनेको यो हो… हामी यस्तो सामग्री लेख्छौं जुन गुगलका लागि अनुक्रमणिका राम्रोसँग… र गुगल त्यस सामग्रीको आधारमा PAID लिंक बेच्न सक्षम छ। गुगलले ठूलो सामग्री र अनुक्रमणिका राम्रोसँग लेख्नको लागि हाम्रो क्षमताबाट पैसा कमाउँदछ, तर हामीलाई अरूको तर्फबाट त्यो सामग्रीको लाभ उठाउन अनुमति छैन। के मेरो साइट विज्ञापनदाताहरु लाई आकर्षक बनाउँछ केवल पाठकहरु मात्र होइन, यो खोज इन्जिन प्लेसमेन्ट पनि छ। गुगलले मूल रूपमा भन्दै छ कि उनीहरू हाम्रो रैंकको स्वामित्वमा छन्, हामी होइनन्, यद्यपि हामी उनीहरू नै छौं जसले त्यहाँ पुग्न सबै कडा मेहनत गरेका छौं!
गुगल किलिंग Scavenging कम्पनीहरू
जस्तै कम्पनीहरु PayPerPost अन्तर्गत संचालित हुनेछ, र अरूले मनपराउँदछन् पाठ लिंक विज्ञापन भूमिगत गर्न बाध्य गरिएको छ। गुगलले युद्ध शुरू गरिसक्यो र हामी सबैको बिरूद्धमा फिर्ता लिन पूर्ण रूपमा तयार छ किनकि हामी उनीहरूको तल्लो रेखालाई प्रभाव पार्दैछौं।
तर हामीले त्यो तल्लो लाइन ड्राइभ गर्न सहयोग गरेनौं? मलाई लाग्छ हामीले गर्यौं! इन्टर्नेटमा ,75,000,000 XNUMX,०००,००० ब्लगहरु Google को ढोकामा एक शानदार TON ड्राइभ गर्दै छन्। गुगलबाट फिर्ता केहि आशा गर्नुको सट्टा हामी विन्ती गर्छौं र प्रार्थना गर्दछौं कि उनीहरूले हामीलाई राम्ररी र प्राय: सूचका .्क बनाउँदछन्।
डेवे दशमलव प्रणाली
गुगलले ब्लगरहरूलाई उनीहरूको ब्लगमा के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भनेर बताउँदै डेवे दशमलव प्रणाली जस्तो हुनेछ उनीहरूलाई उनीहरूको पुस्तकहरूमा लेख्न नसक्ने र लेख्न नसक्ने लेखकहरूलाई।
गुगलले केहि ब्ल्गरहरू जसले लिंकहरू तिरेका छनौट गरेको बारेमा चिरपरिचित विधि हो जुन सामान्य रूपमा तानाशाह र दास मालिकहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ। श्रेणीको बाहिर केहि मतभेदकहरु तान्नुहोस् र तिनीहरूलाई राम्रो कोर्राफ्री दिनुहोस् ... र सबैजनाले काम गरी रहनेछ र बन्द रहनेछ।
लेखकलाई Dewey, “कसैले तपाईंको पुस्तकमा उल्लेखको लागि भुक्तान गर्नुभयो? माफ गर्नुहोस् श्री लेखक, हामी तपाईलाई अनुक्रमणिकाबाट तान्दैछौं। यदि ती व्यक्तिहरू याद गर्न चाहन्छन् भने, हामीलाई भुक्तानी गर्न भन्नुहोस् र हामी तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने प्लेसमेन्ट प्रदान गर्नेछौं। ”
लेखक, "त्यसोभए म कसरी पैसा कमाउने छु?"
Dewey, "ठीक छ, हाम्रो सूचकांकमा भएर तपाइँले धेरै पाठकहरू पाउनुहुनेछ।"
लेखक, "प्रतीक्षा गर्नुहोस्, के यसले तपाईलाई अझ राम्रो वर्गीकरण कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँदैन जसले अझ धेरै पाठकहरूलाई आकर्षित गर्दछ र फलस्वरूप तपाईको उत्पादन स्थान अधिक बेच्दछ?"
डेवे हाँसे, "निश्चित हुनेछ! तर यदि तपाईंले हामीलाई सुन्नुहुन्न भने कसैले पनि तपाईंको पुस्तक पढ्ने छैन। ”
म भन्दै छु, वास्तवमा, त्यो गुगल esणी म म केवल विश्वास गर्छु कि यो कम्पनीको अर्को ठूलो उदाहरण हो कि सानो मान्छेलाई समातेर एउटा प्राथमिक राजस्व स्रोतलाई सुरक्षित गर्न कोसिस गर्दै। प्रासंगिक डेटाको विश्लेषणको उत्तम साधन विकास गर्ने र जैविक लि links्कहरूको बिरूद्ध भुक्तान गरिएका लि links्कहरूको वर्गीकरणको तुलनामा, गुगलले सजिलो सडक लिइरहेको छ।
यहाँ प्रश्न छ, यदि हामी "हडतालमा" गए भने के हुन्छ? के हुन्छ यदि ,75,000,000 XNUMX,००,००० ब्लगले रोबोट फाइल फाल्ने र गुगललाई अनुक्रमणिकाबाट रोक्ने निर्णय गरे ती सबै…! गुगललाई त्यस बिन्दुमा के छोडिनेछ? तिनीहरू प्रेस विज्ञप्ति र कर्पोरेट वेबसाइटहरूको साथ छोडिनेछ। दिनको अन्त्यमा, ती भुक्तान गरिएका लिंकहरू छैनन्? गुगल हामीबिना कता हुन्छ?
मलाई थाहा छ म गुगल बिना कहाँ हुने थिएँ, यद्यपि म राम्रो नोकर बन्ने छु र नियमहरू पालना गर्छु।
मलाई नियमहरू मनपर्दैन, यद्यपि।
टैग: भौगोलिक अनुगमनप्रभावशाली विश्लेषकहरूबहु-डोमेनप्रकाशकभावनात्मक विश्लेषणस्लाइडरसामाजिक सीआरएम एकीकरणसामाजिक मिडिया एनालिटिक्सभिडियो निगरानीभाइरल विश्लेषण
नोभेम्बर,, २०१ at 24::2007 बिहान
यसले मलाई अर्को दिन लेखेको पोष्टको सम्झना आउँदछ
यो तिनीहरूको स्यान्डबक्स हो र जब सम्म कोही एक उत्तम स्यान्डबक्सको साथ आउँदैन ... राम्रोसँग अनुमान गर्नुहोस् कि हामीले गुगल नियमहरू मार्फत खेल्नु पर्छ
मलाई लाग्छ यदि तपाईं आफ्नो सूचका status्क स्थितिमा निर्भर रहनका लागि यातायात चलाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईं एक पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईं गूगल खेल खेल्न उत्तम हुनुहुनेछ। वा अन्य जस्तो तपाईले भनेको भनेको केहि कोडमा राख्नुहोस् Google रोबोटलाई टाढा जानका लागि।
मेरो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मात्र थियो ... किन राम्रो सामग्री लेख्ने छैन ताकि व्यक्तिले तपाईको फिड रिडरमा पाउनेछन्? मैले कहिल्यै ब्लग गरेको छैन र तपाईको ब्लग फेला पारेन तर मैले यसलाई मैले कसैको एलिस ब्लगमा उल्लेख गरेको देखें जुन मैले मनपराएको छु र यसलाई मेरो पाठकमा थपिएको छु।
मलाई द्रुत ड्राइभ गर्नका लागि जान्ने अन्य सब भन्दा तेज तरीका भनेको केहिको बारेमा नकारात्मक लेख्नु हो। Just म सँधै १०x को ट्राफिक पाउँछु जब म केहि "B" क्वालिटी सामग्री लेख्नको विरोध गर्छु।